Hery Rajaonarimampianina : Betsaka no vita ary betsaka no miandry -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Betsaka no vita ary betsaka no miandry
Nandritra ny kabary izay nataon’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina manoloana ny Malagasy rehetra amin’ ny fahazoana ny taona vaovao izao ny fanetren-tena goavana manoloana ny vahoaka izay nanome fahefana azy, “ betsaka ny efa vita, ary manaiky ny tenako fa maro no mbola miandry, satria mbola tsy tafapaka tanteraka any amin’ ny Malagasy tokoa ny vokatry ny asa notanterahina. Ny fametrahana ny fototry ny fampandrosoana mantsy no napetraka, izay takaitra navelan’ny 50 taona lasa” hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nambaran’ny filoha noho izany, izay anton’ny fahantrana zakain’ny Malagasy amin’ izao ny tsy fahalavorariana nandritra ireo fitondrana nifanesy . Na eo aza ireo takaitra ireo tokoa dia tsy nitarain-tana-miepaka ny fitondrana ankehehitriny fa nanao izay ho afany hanavotana ny firenenena, ary nambaran’ ny filoha izany ezaka vita izany nandritra ny kabariny “niezaka isika satria fony vao nitondra ny firenena ny tenako dia 92 % ny tahan’ny fahantrana saingy izao kosa dia nihena ho 72% izany izao, raha ny tahan’ ny harin-karena kosa indray dia 4,1% izany tany aloha izay dia 5,1% ny vina napetraka”. Raha nanao ny jery todika ny taona lasa kosa ny filoham-pirenena tamin’ ny asa vita, dia nilaza fa ny taona 2017 no fahombiazana indrindra nandritra ny taom-pitantanana, na izany aza hoy ny filoha dia mbola hitohy ny ezaka.
“ Marina ary lojika ireo zava-niseho teto amin’ny firenena ireo fa mbola tsy mipaka any anatin’ ny vilanin’ ny vahoaka tsirairay ny ezaka vita, nefa izahay kosa hiezaka ary hanohy hatrany ny asa izay efa natao ho tombontsoan’ ny vahoaka izay” hoy hatrany ny filoham-pirenena . “Nahavita isika, miasa isika, saingy tsorina fa tsy ampy ny vita. Noho izany dia tsy maintsy mitafy fikirizana isika, eo amin’ny fanarenana an’i Madagasikara hahazoana asa ho tombontsoan’ny tsirairay” hoy hatrany ny filoham-pirenena nametraka fanamby amin’ny ho avy.
Anisan’ny nambaran’ny filoham-pirenena nandritra ny kabary izay nataony tetsy Iavoloha ihany koa ny mikasika ny foto-pisainana izay efa mila hovaina amin’izao vanim-potoana izao, satria tokoa hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia mbola misy hatrany ireo izay manana foto-pisainana manimba. Misy tokoa mantsy ankehitriny araka ny kabarin’ny filoha ireo izay tsy mahay afa-tsy ny manakorontana ny firenena ho tombontsoa politikan’izy ireo, ka manontany tena mihitsy ny filoha amin’ireo fihetsika ataon’ny sasany izay tsy mahay afa-tsy ny fanakorontanana ireo.
“ Maninona no tsy mipetraka amintsika Malagasy ny fifanajana, izay fitaovana ahafahana mampandroso. Noho izany dia ilaina ny manova toe-tsaina” hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Amin’ izao tokoa mantsy dia misy ny fanakorontanana sy filazana vaovao tsy marina ary fanosoram-potaka hoy ny filoham-pirenena izay anton’ny fanakorontanana, mazava ny nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina manoloana izany, “ tsy misy ny fahalalahana tsy voafehin’ny lalàna izany. Tsy misy fangalam-piery intsony ihany koa izao , ary arangaranga tahaka ny basy atifi-kavana izany” . Nambaran’ny filoha hatrany fa “ misy ny fanakorontanana tiana atao, ary ny vahoaka no rebirebena tsy hankato ny mpitondra, ampy rahateo izay ny tsimatimanota, kolikoly, fanararaotam-pahefana. Aoka izay ny fieritreretana fa ny fanakorontanana no ho avy politikan’ny sasany” hoy hatrany ny filoha. Noho ireo fanakorontanana ireo dia miantso ny vahoaka rehetra tsy hanaiky ho rebirebena intsony ny filoham-pirenena amin’ny lafiny rehetra, satria dia mizotra amin’ ny fampandrosoana isika izao. Noho ireo rehetra ireo dia nilaza ny filoham-pirenena, ary mametra-panotanina fa hanao fifanarahana inona indray, hametraka Tetezamita inona indray ? Ireo no efa nampikoroso fahana ny firenena.
Manoloana ny filazan’ny sasany sy fanelezan’ny sasany tsaho, izay miendrika fanakorontanana hatrany, dia nanambara mazava androany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa “ hanao fifidianana filoham-pirenena isika amin’ ity taona ity, ary mifanaraka amin’ ny lalàm-panorenana no hanaovana izany” hoy ny filoha nanamafy . Noho izany dia tapitra ny mikasika io adihevitra io, satria dia ny filoham-pirenena mihitsy no nilaza izany. Midika fiomanana ho an’ny rehetra ny fanambaran’ ny filoha omaly, satria dia tsapa hatrany ny fahavononan’ny filoha hanatanteraka fifidianana demokratika. Ankilany noho izany dia niantso amin’ny fitoniana ihany koa ny filoham-pirenena ,mba ahafahana manatanteraka izany fifidianana milamina sy eken’ny rehetra izany . Anisan’ny nanamafy izany ihany koa ny solontenan’ireo masoivoho izay monina sy miasa eto Madagasikara, fa ny fitoniana hisian’ny fifidianana demokratika no ilaina, ahafahan’ i Madagasikara manohy ny ezaka efa atao amin’ny fampandrosoana izay miroso hatrany araka ny fandinihana sy ny fanaraha-maso izay ataon’izy ireo.
L’insécurité qui sévit partout à Madagascar, c’est un thème récurrent dans les discours des politiciens comme dans les conversations ordinaires du grand public. L’insécurité publique prend des formes de plus en plus variées, qui vont ...Tohiny